Hlola i-Cologne, eJalimane - World Tourism Portal
Hlola i-Cologne, eJalimane
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eCologne, eJalimane
Okufanele ukwenze eCologne, eJalimane
Izindawo eziseduzane ongazivakashela
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeCologne
Bukela ividiyo mayelana neCologne
Hlola iCologne, esemfuleni iRhine, idolobha elikhulu kunawo wonke eNyakatho Rhine-Westphalia nedolobha lesine ngobukhulu e Germany enezakhamizi ezingaphezu kwe-1.000.000 (indawo enkulu <abahlali be-3.500.000). Ezikhathini zangezikhathi zakudala kwakuyidolobha elikhulu kunawo wonke eMbusweni Ongcwele WamaRoma. Ungomunye wemidiya yezokuvakasha, ezokuvakasha kanye nezamabhizinisi. ICologne yaziwa ukuthi ingelinye lamadolobha akhululeka kakhulu eJalimane.
Ukunambitheka okuhlukile kwedolobha laseCologne kuvame ukuxhunyaniswa nezakhamizi zedolobha, noma iKölsche, oziqhenyayo kakhulu ngomuzi wazo. I-Cologne idolobha elihlala likhulunywa isiRipu ngokwesiko, yize iningi leli selithathelwe indawo isiJalimane, manje esilulimi lwedolobha. Imihlahlandlela ekhuluma isiNgisi nolwazi luyatholakala kumaningi omhlaba wedolobha. Kubavakashi abakhuluma isiJalimane futhi abafisa ukusisebenzisa, izakhamizi zivame ukubekezelela kakhulu labo abazama ukuthola lolu limi. Izakhamizi zaseCologne zingabantu abanobungane futhi abanamahloni, bemukela izivakashi zazo zonke izinhlobo nangazo zonke izintshisekelo.
Kude nezimpawu zomhlaba, izisebenzi zaseDeutsche Bahn (izitimela zaseJalimane) zivame ukukhuluma kahle isiNgisi kahle, futhi imishini yamathikithi inesici sokukhethwa kolimi. Ngokuvamile, abantu asebekhulile baseCologne bavame ukuba nolwazi oluncane noma oluncane lwesiNgisi, kuyilapho abaseJalimane abancane nalabo abasebenza kwezamabhizinisi bavame ukuba nekhono elifanele. Ulimi aluvamisile ukuba yisithiyo esiqinile, ngakho-ke lokhu akufanele kube ukukhathazeka ngokweqile kubavakashi abaphakathi. Vele usondele kumdabu onobungane futhi usebenzise ukumamatheka ebusweni bakho.
I-Cologne inethiwekhi enhle kakhulu yokuhamba komphakathi enamathikithi, izitimela zendawo namabhasi. Amabhayisikili ayatholakala ngokuqashwa ohlangothini olusenyakatho lweHauptbahnhof. Izinhlelo zokuhamba zasendaweni akuvamile zinikeze izimemezelo ngesiNgisi, kepha amamephu wenethiwekhi atholakala kakhulu ukukusiza ngohambo lwakho. Abafisa ukuhlola indawo ekude nedolobha eliphakathi nendawo kufanele bahlele uhambo lwabo nokuxhuma okungenzeka ngaphambi kokuhamba. Iwebhusayithi yeKVB (Kölner Verkehrs-Betriebe) ingumthombo omuhle wolwazi lokuhamba komphakathi.
Isimo sezulu esenyakatho nentshonalanga yeJalimane siyashintsha, ngokushintsha kwezinkathi ezithileko kanye nesimo sezulu sansuku zonke sivame ukuqhathaniswa naleso eseningizimu-nasempumalanga England noma eNyakatho France. Abahambi abaya eCologne bangalindela ukuthi isikhathi esishisa kakhulu sonyaka sibe ngoJulayi nango-Agasti. Izinga lokushisa lingaba ngaphezu kwe-30 ° C (86 ° F) izinsuku eziningana, kepha lingabanda kakhulu nge-20 ° C (68 ° F) futhi. Inyanga ebanda kunazo zonke kunguJanuwari, futhi izinga lokushisa liphakathi kwe-0 ° C (32 ° F) ne-11 ° C (52 ° F) phakathi nosuku. Imvula eningi iwela ngoJuni ngenxa yemvula nokuduma kwezulu. Ngaphezu kwalokho isimo sezulu sithande ukuba nzima, ikakhulukazi ngesikhathi sokuwa nobusika.
Yebo, isiJalimane siwulimi lwaleli dolobha kodwa kulula kakhulu ukuthola ulwazi ngesiFulentshi nesiNgisi, kwesinye isikhathi nangeSpanishi nesiJapan. Ngenxa yenani elikhulu lokufika, iPersian, iTurkey, isiPolish nesiRussia nazo zikhulunywa kabanzi. Izimemezelo esiteshini esikhulu sesitimela (iHauptbahnhof) ziseJalimane yize abanye bebanga elide nezitimela zaphesheya zinememezelo olwengeziwe ngesiFulentshi nesiNgisi.
ICologne idinga ukuthi zonke izimoto zibe nesitika se- “Low Emissions” ukuze zishaye phakathi enkabeni yedolobha (Low Emission Zone, “Umweltzone”). Imininingwane yokuthola isitikha okumele yenziwe okungenani amaviki ambalwa ngaphambi kwalokho.
I-Cologne ine, njenge Berlin, Munich futhi Frankfurt, uhlelo lwe-Call A Bike. Ngemuva kokubhalisela i-akhawunti ku-inthanethi, kuzokhokhisa ikhadi lakho lesikweletu ngemali ekhokhwa ngomzuzu ngamunye. Ungathatha noma ulahle eyodwa yamabhayisekili abomvu kwesiliva noma kuphi edolobheni. Kungenzeka futhi ukuqasha ibhayisekili ezindaweni eziningi ezahlukahlukene; ngebhayisekili mhlawumbe indlela engcono yokuhamba uzungeze idolobha.
Kepha, phezu kwako konke, isikhungo seCologne asisikhulu kangako sedolobha lesigidi. Kungenzeka ngokuphelele ukuhamba usuka komunye umkhawulo wesikhungo, ukusho, iRudolfplatz, uye komunye umkhawulo, uthi, i-Dom, ngezinyawo ngesigamu sehora.
I-Kölner Dom. NgoMsombuluko - ngeSonto: 6.00 - 19.30. Kuvikelwe yi-UNESCO, iCologne's Dom kungumbono wokuqala owubonayo lapho uthatha ukuphuma okuphezulu esiteshini esikhulu. (Uma ungayiboni, uthathe indlela yokuphuma yangasemuva.) Uma usesimweni esihle, thatha izitebhisi ze509 uye phezulu kwesakhiwo eseningizimu. Kuthatha cishe ihora, ngakho gqoka izicathulo ezintofontofo, kepha kufanelekile ukuhamba. Ukuya eKhathedrali kwenqatshelwe ngesikhathi seMisa. Ukungena esontweni lamahhala kumahhala kodwa uzocelwa umnikelo. Kwemukelwa kuzindleko zombhoshongo. Ukwemukelwa ezindlekweni zomgcinimafa, noma kunjalo, ithikithi elihlanganisiwe elikunikeza ukwamukelwa kumgcinimafa nakumbhoshongo lingathengwa.
Amasonto ama-12 Romanesque: ISt Kunibert (enamafasitela amahle kakhulu engilazi), iSt Severin, iSt Maria Lyskirchen, iSt. Andreas (enezindawo zokupheka zekhulu le-14th kanye nendawo ebiyelwe nge10th century, okuyindawo yokungcwaba ka-Albertus Magnus), iSt. (ngemidwebo ephikisayo evela kuma-1990s), eSt. Gereon, eSt Ursula, eSt Pantaleon, eSt Maria im Kapitol, eGroß-St. UMartin, uSt. Georgia noSt. Cäcilien.
U-Die Kölner Synagoge, Roonstraße 50. Isinagoge liyaphawuleka ngokwakhiwa kwalo okubukeka kahle, ngaphandle kweGotham City. ITorah ngaphakathi kwesinagoge yasindiswa ngumpristi wamaKatolika kwelinye lisinagoge njengoba yayishiswa ngesikhathi sokubusa kwamaNazi. Ngo-Agasti we-2005 uPapa Benedict XVI wahambela esinagogeni, waba upapa wesibili ukuvakashela esinagogeni.
IVeedel - Izakhiwo Zedolobha. I-Cologne yaziwa kakhulu nge "Veedel" yayo noma izindawo ezingomakhelwane. Lapha, ngokubaluleke kakhulu ku-Agnesviertel ye-bohemian, ungathola abaklami abazimele, izitolo zokubhalela, imigoqo, nemidwebo yobuciko. Kukhona nezikhumbuzo eziyisikhumbuzo zomlando, njengeNorth City Gate noma i-Eigelsteintorburg e-Agnesviertel, eduzane kakhulu neFort X, eyakhelwe ukuvikela leli dolobha ekuhlaselweni yiFrance, kanye no-Agneskirche, isonto lase-neo-gothic elisekupheleni kwe-boulevardesque Neusserstrasse. INeusserstrasse inesikole se-yoga, isikole i-Aikido, indawo yokudlela yaseJapan, isitolo esidayisa izincwadi kahle kanye nohla lwama-pub. Eduze kwalapho uzothola i-Alte Feuerwache, lapho kunemibukiso ejwayelekile ngezihloko zezepolitiki kanye nemakethe yezikebhe ezibuye zenziwe njalo emavikini amane ehlobo. U-Alte Feuerwache ophikisayo yi-Artclub, enemibukiso ejwayelekile yezobuciko besimanje, futhi kwi-Ebertplatz kukhona i-cinema (Metropolis) ekhombisa amafilimu ngolwakuqala (Iningi lesiNgisi, kepha kwesinye isikhathi neFrance noma iSpanishi). E-Lübeckerstrasse eseduze, uzothola i-cinema enganqamuki ye-Arty Filmpalette.
I-Hohenzollern Bridge: Ibizwa nangokuthi i-Locking Bridge. Uma uhamba ngemuva kwe-Kölner Dom eceleni kwendlela eqondile, kukhona ibhuloho eRhini ngakwesokunene sakho esimbozwe ngamabhlogo. Izikhiye zibekwa lapho ngabashadikazi ukukhombisa ukuthembeka kwabo komunye nomunye. Imibhangqwana imvamisa inamagama ayo nosuku olubalulekile olubhalwe phansi kwizikhiye. Zikhona ezinye izindawo emhlabeni wonke ezinamawashi wothando.
IRheinauhafen (Ichweba): Le ndawo eyakhiwe kabusha ihlanganisa ukwakhiwa kwesimanje nokwakha izakhiwo zomlando wetheku. IRheinauhafen yakudala yavula ku-1898 futhi yadingeka ngenxa yesibalo esandayo sezithuthi zomgwaqo. IRheinauhafen entsha ingxube yezakhiwo zamahhovisi nezakhiwo zamafulethi nezindawo zokudlela. Ngokuqondile etholakala enhlonhlo eRhine (i-1 km eningizimu yeHeumarkt), kuyisimemo sokuhamba okuhle eceleni komfula noma isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa.
Izindawo Zokupaka: I-Cologne inezindawo zokupaka i-2 (Grüngürtel) ezungeze idolobha (ngokushesha ngaphandle kwemikhawulo yedolobha eliphakathi) futhi cishe lonke idolobha, ngokulandelana, ezazibekelwa eceleni njengezindawo zokuzijabulisa zomphakathi ngemuva kweMpi Yezwe I. IGrüngürtel yangaphakathi cishe ilula kakhulu finyelela izivakashi ezihlala izinsuku ezimbalwa. Okuphawuleka kakhulu yiVolksgarten, iRheinpark, Hiroshima-Nagasaki- (colloqupecingly as Aachener-Weiher-) kanye naseStadtgarten parks lapho izinkulungwane zabantu zibuthana khona ukuzothokozela ilanga, zidlale ne-barbecue lapho isimo sezulu sihamba kahle. Onke la mapaki anegadi yobhiya ehambisana nayo. Yazi ukulahla noma yikuphi ukupakisha, amalahle njll emigqonyeni kadoti (ngeshwa okumbalwa futhi okude kakhulu), njengoba idolobha seliqalile ukuqasha ama-patrols angahambisani nokukhokhisa inhlawulo yokuqina kunoma ngubani obona udoti. IMetro: I-Eifelplatz yeVolksgarten, i-Universitätsstra fore yeHiroshima-Nagasaki-Park, iHans-Böckler-Platz / i-Bahnhof West yeStadtgarten, Bahnhof Dhez for Rheinpark.
I-Cologne inesinye samaqoqo amahle kakhulu weminyuziyamu nemipheme yedolobha elinobukhulu bawo. Kanye neminyuziyamu esezingeni lomhlaba yezobuciko kanye nemivubukulo, iCologne ineminyuziyamu emibili yobuciko benkolo, yomibili igcinwe ezakhiweni ezinhle kakhulu. Kukhona nomnyuziyamu we-ethnographic, imnyuziyamu ye-chocolate, iMnyuziyamu Wezemidlalo waseJalimane nezinsalela zezinsalela zamaRoma. Umuntu angathenga ikhadi leMnyuziyamu kwelinye lamamnyuziyamu kamasipala (njengelokuqala ezinhlanu ezibhalwe ngezansi). Ikhadi lomndeni, linikeza abantu abadala i-2 nezingane ze-2 (ngaphansi kwe-18) ukungena mahhala kumnyuziyamu ngamunye kamasipala ngezinsuku ezimbili ezilandelanayo zokuvula. Ngosuku lwayo lokuqala ukusebenza, ingasebenza futhi njengethikithi kuwo wonke amabhasi nakuma-trams ohlelweni lokuhamba lwasekhaya i-VRS.
Imyuziyamu Ludwig, Bischofsgartenstraße 1. NgoLwesibili kuya ngeSonto: 10AM - 6PM.
Imnyuziyamu yezobuciko besimanje, esiteshini esiphakathi nendawo kanye ne-Dom ibamba umbukiso ofanele ojwayelekile, kanye nemibukiso yesikhashana.
Imyuziyamu für Angewandte Kunst (uMnyuziyamu wezoBuciko obusebenza) NgoLwesibili - NgeSonto: 11AM - 5PM. UMuseum für u-Angewandte Kunst uneqoqo lezinto ezithandwayo zokudweba, kanye nemibukiso yesikhashana.
I-Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Martinstraße 39. NgoLwesibili kuya ngeSonto: 10 am to 6 pm, Njalo ngoLwesine kuze kube yi-9 pm
IWallraf-Richartz Museum igalari yezobuciko eneqoqo lobuciko obuhle kusukela esikhathini sangesikhathi saminyaka yamashumi amabili.
I-Römisch-Germanisches Museum, iRoncalliplatz 4 (eduze kwalapho kubekwe khona uhlangothi olungakwesokudla lweCathedral ukusuka endaweni yayo enkulu. ULwesibili - ngeSonto 10 AM - 5 PM.
I-Römisch-Germanisches Museum ibheka umlando womlando wamaRoma eCologne nendawo ezungezile. Imihlahlandlela yokuvakasha yomnyuziyamu ibuthaka ngokuhlukile futhi ingenza noma yikuphi ukuvakasha kubonakale sengathi kwathatha isikhathi eside nje njengoMbuso WaseRoma. Uma ukwazi, zula uzungeze imyuziyamu uwedwa.
I-Rautenstrauch-Joest-Museum - Izakhi Zomhlaba, Cäcilienstraße 29-33. NgoLwesibili kuya ngeSonto: 10PM - 6PM uLwesine: 10AM - 8PM.
Isizinda semnyuziyamu semvelo saseNyakatho Rhine-Westphalia kuphela, sineqoqo elihle le-Amerindian ne-Australia-IsiPolynesia izinto zobuciko.
I-Museum Schnütgen, Cäcilienstraße 29-33. I-F-Su & Tu-W 10: 00-18: 00, Th 10: 00-18: 00 (kuze kube yi-22: 00 ngoLwesine wokuqala enyangeni). Ubuciko benkolo nobungcwele ikakhulukazi obuvela kuma-Middle Ages, asesakhiweni esikhulu esivela e-2010 nesifaka nesonto langaphambili le-St Cäcilia.
I-Kolumba - imnyuziyamu yaseDiocesan, iKolumbastraße 4 - 50667 Köln. Umnyuziyamu wobuciko bobuKristu. Isimanga sezakhiwo nomkhosi wezinzwa; lo mnyuziyamu, owakhiwe ngokuhambisana nezisekelo zasendulo zesakhiwo sikaMariya emfucumfucwini uqukethe ubuciko bezenkolo obungokomlando nobungokwesikhathi. Kukufanele ukuvakashela nje ukuhlola izikhala ezikhuthazayo ngokomoya kanye nokuhambahamba okuhle emanxiweni esikhathi esedlule.
NS-Dokumentationszentrum (Isikhungo semibhalo yeNational Socialism)
IStookoladenmuseum (Museum of Chocolate), Am Schokoladenmuseum 1a, D-50678 Cologne. Amahora wokuvula: uLwesibili. kuya kuFri. I-10AM iye kwi-6PM Sat., ILanga, amaholide * i-11AM ukuya kwi-7PM ivaliwe ngoMsombuluko (* bona imininingwane yabavakashi) Ukuvunyelwa kokugcina ihora elilodwa ngaphambi kokuvalwa. I-Chocolate Museum eCologne. Ukuvakasha okufushane kepha okuthakazelisa kakhulu.
Uhlangothi oluqinile lukaCologne yimpilo yalo yamasiko.
UKölner Karneval (Cologne Carnival) - Umkhosi omkhulu kakhulu eCologne yi-Carnival yasebusika (noma i-Fastelovend) ngoFebhuwari. Ngokusho kwewebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eCologne: "Kugqamiswa kakhulu emcimbini wokugcotshwa komgwaqo ovela eWeebherlinenacht (Usuku Lwabesifazane BaseCarnival), uLwesine ngaphambi kuka-Ash ngoLwesithathu, ngokwesiko usuku abesifazane abalawula ngalo leli dolobha ukuya eKarnevalsdienstag (Shrove ngoLwesibili). ERosenmontag (Shrove ngoMsombuluko) abantu abangaphezu kwesigidi nesigamu bangena emigwaqweni yaseCologne bezobuka lo mncintiswano nohlanya olunezinhlanya - inkosana, umlimi, nentombi nto minyaka yonke.
U-Kölner Lichter (Cologne Lights) - ukhanyisa isibhakabhaka ngamalangabi phakathi kwamabhuloho aseHohenzollern naseZoo.
Kölner Seilbahn; I-Riehler Straße 180. Amahora: Ephreli - Okthoba 10 AM - 6 PM; Thatha uhambo ngomgwaqo ohamba nge-Aerial uwele umfula iRhine, EJalimane ikhebula kuphela imoto eliwela umfula!
I-Zoo; I-Riehler Straße 173. Amahora: Ihlobo: I-9 AM - 6 PM, Ubusika: 9 AM - 5 PM, Aquarium: 9 AM - 6 PM.
Phantasialand -Berggeiststr. I-31-41 (Edolobheni laseBrunhl). Amahora: I-9 AM - i-6 PM, Ukugibela kuvuliwe e-10 AM, Ihhovisi lamathikithi livalela e-4 PM; - I-Phantasialand yindawo ejabulisayo yezingane futhi inamigibela ethize yabantu abadala nayo. Ngisho neColorado Adventure roller coaster yayixhaswe nguMichael Jackson. Kudlula izinsuku ezimbili.
I-Claudius Therme, iSachsenbergstraße 1. I-09.00-24.00. ngezansi nje kweKölner Seilbahn yiClaudius Therme. Chitha amahora ambalwa okuphumuza ungavuli ndawo kuzo zombili amachibi angaphakathi nangaphandle, ama-saunas, amachibi okubanda, njll. Izindawo eziningana ziyi-naturist (hhayi okokugqoka ngokuzithandela). Kutholakala amathawula okuqasha bese kuthi kudliwe ukudla neziphuzo esizeni.
Metropolis Cinema, Ebertplatz 19. I-15.00-24.00. Uma ufuna ukuya kuma-movie ngenkathi uvakashela i-Cologne futhi ungasazi isiJalimane, iyi-cinema yakho. Kusihlwa kukhombisa ama-movie ngolimi lwabo lwendabuko, kepha ikakhulukazi amaNgisi.
Izimakethe zikaKhisimusi. NgoDisemba, kunezimakethe eziningi zikaKhisimusi ezungeze iCologne, edume kakhulu ngokuba yilapho eduzane nekhathalogi naleyo eseNeumarkt (UMarkt der Engel - Market of Angels), kodwa futhi kunezinto ezincane, ochwepheshe abanjengemakethe ye-fairytale kanye imakethi yangezikhathi zakudala.
Ihhovisi lezokuvakasha laseCologne, u-Unter Fettenhennen 19. I-MF 09: 00-22: 00, Sa-Su 10: 00-18: 00. Ihhovisi Lezokuvakasha LaseCologne linikezela ngemininingwane eminingi yezihambi ezifisa ukugcwalisa uhambo lwazo ngemisebenzi ezungeze idolobha. Buza ngezincwadi zeziqondisi ezitholakalayo, eziningi zazo ezinikezela ngemininingwane ebalulekile mahhala.
Vele wazi ukuthi ngesitayela esijwayelekile saseJalimane, zonke izindawo ze-sauna (ezibizwa ngeSaunalandschaften, okungukuthi izindawo zomhlaba weSauna) zixubile (ngaphandle kweDamentag engathandeki) nokuthi izingubo zokugeza zivinjelwe zona ngenxa yezizathu zokuhlanzeka. Thatha isitsha sokugeza (ukukugcina ungabandi kumakhaza ngaphandle kwama-saunas) nethawula elikhulu (ukubeka ngaphansi kwakho kuma-saunas) nawe. Ungafinyeleli esiphethweni esisheshayo futhi: ubunqunu obuxubekile abwenzi lezo zindawo ezinamasango esono, okuphambene nalokho. Ubunqunu buthathwa njengokuphela kwengubo efanelekile kuma-saunas, futhi konke kwenzeka esimweni esihle, esihle, esiphephile nenenhlonipho. Cishe enye yezindlela eziphakeme kakhulu zempucuko yaseJalimane umuntu angaba nazo. Izigqoko nezigqoko zokugqoka zokugeza ziyoxoshwa ngabasebenzi ngaphandle kwezikhathi ezibucayi, ngakho-ke ungacabangi nokuthi ungahle uphele lapho udlala isivakashi ebesingazi, ngeke senze umehluko.
I-Globetrotter, isitolo esikhulu esithengisa konke nje okuxhumene nokuhamba (okokugqoka, izikhwama zasemuva, ukuhamba izintaba kanye nokukhuphuka ngamagiya, izincwadi, amatende, ukulala emuva…) Banikeza yonke imikhiqizo enkulu, kepha futhi banomkhiqizo wasekhaya ongabizi kakhulu. Amakamelo amathathu nendawo yokubhukuda lapho ungazama khona izikebhe, igumbi lomoya nomoya weqhwa. Indawo yokudlela kanye nezindlu zangasese.
Kukhona inala yezitolo zamarekhodi eCologne, kepha iningi lifihlwe ezindaweni okungezona izivakashi.
ISkyating yathandwa kakhulu futhi kunamabhisikidi amaningi eCologne.
ICologne inezindawo zokudlela ezahlukahlukene, ezesiJalimane nangezinye izindlela.
Umuntu angadla kahle ezindaweni zokudlela ezijwayelekile zaseKölsch, futhi empeleni njengesivakashi, kufanele uzame okunye ukudla kwendawo, okuyi-rustic kodwa emnandi, futhi yokujabulisa inhliziyo.
Amompompi wokuphisa (uFrüh, uSion, Pfaffen, Malzmühle njll. Edolobhaneni elidala eliseningizimu ye-Dom) kufanele unake leyo nhlonipho, yize zivame ukubiza kakhulu ngalokho okutholayo.
Uzothola izitsha ezijwayelekile zeRheinland kulezo zindabuko zendabuko. Okwakudala kufaka phakathi:
IHalver Hahn: islabha enhle enkulu ye-gouda yaseRussia enomugqa weRye (Röggelchen)
I-Himmel und Äd mit Flönz: umvimba wegazi othosiwe namazambane abunjiwe (“umhlaba”), isoso se-apula (“izulu”) no-anyanisi othosiwe.
I-Soorbrode / Sauerbraten: kuhlangene okwenziwe ngomviniga kuviniga owenziwe ngamagilebhisi omisiwe, kuvame ukukhonzwa ngeklabishi elibomvu kanye ne-kloss (ukulahlwa kwamazambane). Ihlanganisiwe ingaba yinyama yenkomo noma yamahhashi, ngakho-ke ungahle uthande ukubuza kuqala…
I-Dicke Bunne mit Speck: ubhontshisi omhlophe obilisiwe onezinhlaka zobhontshisi abilisiwe ngaphezulu.
ISchweinshaxe (eyosiwe); I-Hämchen (ephekiwe): umlenze wengulube, imvamisa ethile yesilo (ukusuka ku-600 kuya ku-1400 g, kufaka phakathi ithambo)
I-Rievekoochen / Reibekuchen: amakhekhe amazambane athosiwe athosiwe uvame ukunikezwa kanye ngesonto, futhi akhonze ngezinhlobonhlobo zezindawo zokushukela ezimnandi noma ezinosawoti, ezingabandakanya i-apula isoso, iRübenkraut (i-beet-sourced ecishe ilingane ne-treasure emnyama) noma i-salmon ebhemayo nekhilimu we-horseradish.
Umnyuziyamu we-mustard (osendaweni engaphesheya komnyuziyamu we-Chocolate) obonisa umbukiso omfushane kakhulu wamahhala mayelana nesinaphi uyindawo enhle yokumiswa ngokuvakasha.
Uma ufuna ukudla okulula, ungaya kwenye yezindawo eziseMiddle-Eastern noma zase-Asia. Izindawo zokudlela zase-Italy eCologne kubukeka sengathi zizama ukuqonde ikhwalithi ephezulu kunase-UK, yize kungaxoxiswana ngayo noma ziyayifinyelela, nokuthi ngabe izintengo zazo (kaningi i-150-200% yamanani entengo yase-UK) ziyavunyelwa. Kukhona izindawo zokudlela ezimbalwa zamaNdiya kulo lonke idolobha, ezisebenza kahle, yize i-Brit evakashele ingadumala kancane ukuthola ukuthi "isiko le-curry" laseJalimane lifana nelase-UK kuma-1960: amamenyu awekho amakhulu futhi ahlukahlukene. futhi azijwayelekile futhi zongcweti, futhi yize izithako zintsha, ukudla ngaphandle kokunye kubonakaliswa kunganciphisi ulwelwesi oluhlelekile lwaseGerman futhi abapheki banokungabaza ukuliqongelela noma ngabe likucela. Muva nje, izindawo zokudlela zaseJapan nezaseThailand sezande kakhulu; zombili ziyabiza impela.
Ubhiya ojwayelekile waseCologne ubizwa nge- “Kölsch” futhi ukhonza imigoqo ezungeze idolobha ngezibuko ezincane, ezibizwa nge- “Stangen”, ze0.2l. Ngaleyo ndlela ubhiya uhlala musha futhi ubanda. Ungakhathazeki; abalindi bazoshesha ukuletha okusha uma sekuqediwe okwakudala. Kwimigoqo yendabuko eminingi futhi ikakhulukazi imifelandawonye yezitolo, isikhonzi (esibizwa ngokuthi “i-Köbes” ngolimi lwendawo) sizokunikeza neKölsch entsha ngaphandle kokucelwa, ngakho-ke kulula ukulahlekelwa umkhondo wokuthi uphuze kangakanani. Uzobeka umugqa wepensela ku-coaster yakho kubhiya ngamunye owuphuzile, lokhu kuzoba yisisekelo sedili lakho, ngakho-ke ungakulahli! Ukuze umise ubhiya ungafiki, shiya ingilazi yakho icishe igcwale kuze kube yilapho ucele umthethosivivinywa noma ubeke ukhonkolo wakho phezulu kwengilazi yakho engenalutho.
Uma uthenga iKölsch enamabhodlela, thatha “Reissdorf”, “Früh”, “Gaffel” noma “Mühlen”, ezikalwa kakhulu yizakhamizi zaseCologne. Abafuna ubhiya onomunyu omncane bangathanda ukuzama i-Küppers (kukhona eminye imikhiqizo ye-30).
Kunemigoqo eminingi kanye nama-pubs ongakhetha kuwo kusuka lapho ongachitha khona ubusuku obuningi usuka kwelinye ibha uye kwelinye
Njengakwamanye amadolobha aseJalimane ungahamba uzungeze idolobha ngenkathi uphuza ubhiya ngeBeerBike futhi ujabule.
Ngemikhiqizo yendabuko, yiya e-Altstadt ezungeze i-Dom, lapho umthetho wokwenza “u-Früh Kölsch” udume kakhulu, kanye nezivakashi kanye nabasendaweni. Uzothola isixuku esincane e "Hellers Brauhaus" e Roonstraße, eduze kwesiteshi sika metro Zülpicher Platz noma "Brauhaus Pütz" e Engelbertstraße eduze nase Rudolfplatz. Ngaphezu kwalokho i- "Päffgen", emgaqweni osebenzisa ibha yonke iFriesenstraße eduze naseFriesenplatz, kanye ne- "Mühlen" eduzane naseHeumarkt kuyizindawo zokuhanjiswa kwezimpahla zendabuko kodwa izivakashi ezingaphansi kune "Früh". Kunconyelwe futhi yi- "Sion", okuwumbhalo omncane owaziwa, kepha uthokozelwe ukuthi muhle kakhulu, yize abanye abathanda ibhiya bekuthole kuphuthwa umlingisi ukusuka ku-2007 kuya phambili. Ama-pubs amaningi e-Altstadt acasulwa ngokuthi "izicupho zezivakashi" ngabantu bendawo, noma kunjalo: amanani entengo lapha avame ukuphakama kuno-eg ku-Zülpicher Straße.
Kunemigoqo eminingi yanamuhla nezilokotho nxazonke zedolobha. Ezinye ezihamba phambili ziseZülpicher Straße. Kokuthile okuzimele futhi okumnandi kakhulu kulo mgwaqo, zama i-Umbruch (funky) noma i-Stiefel (punky). Isabelomali Esiphansi ku-Aachener Straße eduze kweMettkestraße metro enhle, engenasizotha, ne-punky bar enezinto ezikhethiwe ezinhle zeziphuzo futhi ihlala iphethe amakhonsathi, izinkondlo noma izikhathi ze-cabaret.
Izindawo eziningi ezisesitayeleni zisendaweni ebizwa ngokuthi yiBelgian phakathi kwe-Aachener Straße neRand.
Izivakashi kufanele ziqaphele ikakhulukazi lapho kuqeqeshelwa khona isitimela, isikwele esiseduze neCologne Dom okuyi-pickpocketing eyaziwayo nezidakamizwa ezixhaphaza izidakamizwa ezinamaqembu amancane asemgwaqweni wesilisa. Futhi, qaphela iRing, egcwele amakilabhu nezixuku zesikhathi sobusuku emigwaqweni. Ngesikhathi sobusuku nobusuku, kungakuhle ukuthi uqaphele ezindaweni ezingaphandle ezifana neChorweiler, Porz, Seeberg, Ostheim, Bocklemünd, Ossendorf, neVingst. Ngokuvamile, gwema ukungena ezilwaneni futhi uhlale kude nabantu abadakayo, nokuthi abesifazane akufanele bahambisane nesikhathi sasebusuku bezungeza esiteshini esikhulu.
UBonn, inhloko-dolobha yangaphambili yaseNtshonalanga Germany itholakala eningizimu futhi kulula ukuyifinyelela ngesitimela noma ngeStadtbahn.
IBrühl, cishe indawo engaphansi kwedolobha laseCologne, iqukethe isigodlo sika-Augustusburg esibekwe kuLuhlu Lwamagugu Omhlaba lwe-UNESCO. Lesi sigodlo singenye yemisebenzi esemqoka yeBalthasar Neuman, futhi siqukethe enye yezindawo ezinhle kakhulu zeRococco emhlabeni, okugqamile ukuthi kube isitebhisi esikhulu. Futhi emabaleni kukhona iLodge enhle kakhulu yokuzingela yeFalkenslust. IBrühl ingafinyeleleka kalula ngesitimela kuzungeze imizuzu ye-20 ukusuka eCologne. Ipaki yengqikimba yePhantasialand nayo iseBrühl.
IKönigswinter Idolobhana elisemfuleni iRhine elifinyeleleka ngesitimela. Idume ngesakhiwo sayo esonakalisiwe esicwebezelayo esiqongweni i- "Drachenfels" (Dragon Rock) ngokubukwa okumangalisa ngaphesheya kweRhine (ngaseBonn naseCologne).
URuhr (Ruhrgebiet) Uma ngabe unesifiso embonini esindayo lokhu kungaba uhambo olufanele. Itholakala cishe nge-100 km enyakatho neCologne. Lesi sifunda, ebesiyisikhungo sezimboni zamamontan (amalahle nensimbi) eJalimane, siseza ngoguquko oluhlelekile futhi ngokuziqhenya siveza esidlule saso sezimboni ku-Industrial Heritage Trail.
IZülpich - idolobhana eliseningizimu nentshonalanga yeCologne kusukela ngezikhathi zamaRoma. Inomnyuziyamu osanda kuvulwa ogxile ekugezeni kwamaRoma nasikweni lokugeza. Kuyisango futhi ukuya emagqumeni amahlathi esifundeni i-Eifel.
Uma ufuna ukuhlola i-Cologne nendawo ezungezile, ukusondela kukaCologne eduze kwamaJalimane / i-Belgian / Dutch emngceleni wempelasonto oya ezindaweni ezingaphandle kulula ukuhlela. I-Thalys isebenza ngezitimela ezihamba ngesivinini esikhulu ukuya Paris kanye neBrussels, neDeutsche Bahn kuya Amsterdam, okwenza idolobha ngalinye libe namahora ambalwa kuphela. Ungahamba futhi uye eMaastricht (idolobha ngaphakathi abase Netherlands nesikhungo esihle sedolobha lapho kwasayinwa khona iMataba ye-Maastricht ye-European Union e-1992 ngemali ephansi ngokuthatha isitimela esiya e-Aachen lapho ngebhasi elibangise eMaastricht.